सानै गल्तिमा बरू श्रीमान/श्रीमती बदल्छन् तर जति खराब भए पनि आफ्नो पार्टि बदल्दैनन् ! « Pana Khabar
सानै गल्तिमा बरू श्रीमान/श्रीमती बदल्छन् तर जति खराब भए पनि आफ्नो पार्टि बदल्दैनन् !
प्रकाशित मिति : Nov 15, 2017
समय : 12:08 am
बरू अचेल सानो कुरामा चित्त नबुझ्दै पनि मान्छेहरू छिनमै छोराछोरी सहितका श्रीमान्/श्रीमती नै चटक्क छोडिदिन्छन् र नयाँ स्वतन्त्रताको खोजीमा निस्कन्छन् । तर आफूले समर्थन गर्दै आएको पार्टिले देश र जनताको विरूद्दमा सयौं गद्दार निर्णय गरे पनि, हजार चित्त नबुझ्दा कामहरू गरे पनि फेरी पनि त्यही पार्टिको दास भएर त्यस्कै समर्थनमा वकालत गरिरहन्छन् । कहिल्यै देशको झन्डा नबोकेका हातहरूले पार्टिको झन्डा बोकेर उफ्रिरहन्छन् । तिनै पार्टिको निम्ति मर्न तयार हुन्छन् – मार्न तयार हुन्छन् । तर त्यो पार्टी छोड्ने र नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्ने हिम्मत कहिल्यै गर्दैनन् । फेरी पनि तिनै भ्रष्टहरूलाई विजय गराएर विजयको अवीर दली काँधमा बोकेर हिंडिरहन्छन् । अनि कसरी बन्छ देश ?
देश बदल्नु छ भने पहिले जनताको सोच बदलिनु जरूरी छ । जनताले आफ्नो विचार र सोच नबदलेसम्म नेता बदलिंदैनन् । नेताहरू नवदलिएसम्म यी विसौ बर्ष परिक्षण भएर असफल भएका नेताहरूबाट सम्वृद्दिको सपना साकार हुँदैन । पुरानै भुत्ते नेताहरूमा धार लगाउन पनि अब जनता रेती हुन तयार हुनुपर्छ । पुरानै नेता छोड्न नसक्ने हो भने पनि ढुंगैमा सही अब नेताहरूलाई घोटेर धार निकाल्नु पर्ने बेला आएको छ ।
यो ज्यु ज्यु गर्ने दास युग हैन । अब जनताहरू प्रश्नहरू बोकेर उभिनु पर्ने बेला आएको छ । नत्र यिनीहरू मध्ये कसैले सनकको भरमा फेरी पनि उनिहरूको आफ्नो स्वार्थको निम्ति कलम समाउने तपाईहरूका नानीहरूका हातमा एकदिन फेरी बन्दुक थमाइदिने छन् र कलेज जानु पर्ने आफ्नो किसोर छोराछोरी फोकटमा क्रान्तिकारी योद्धा भएर जंगल पसेको तपाईले देख्नु पर्नेछ ! विकास र सम्बृद्दी, समानता, न्याय र भ्रष्टचार न्युन समाज र देश आफ्नै पालामा हेर्न पाउने उपाएको खोजी गरौं नकि यस्तो दुर्दशा ! भोट सही ठाऊँमा, सही मान्छेलाई दिनुहोला । जे रोपिन्छ, जस्तो रोपिन्छ— त्यही फलको मात्र सपना देख्न मिल्छ ।
सबै खराब छन् भने पनि खराब मध्येको असललाई छानौं । आफू सुध्रौ र नेताहरूलाई पनि सुधारौं । कसैले यत्तिकै हातमा लड्डु जसरी सुनौलो नेपाल ल्याएर राखिदिंदैन । सोचौ ।पटक पटक सोचौं । आफ्नो अमूल्य मतको सही सदुपयोग गर्न जरूरी छ । चुनाब भन्दा महान उत्सब जनताको निम्ति अरू हुन सक्दैन । उत्सब पछि पनि उत्सब रहिरहने हिसाबले मताधिकार प्रयोग गरौं ।
सबको जय होस् । सबै असल नेताहरू र विवेकी जनताहरूमा नजिकै आइरहेको चुनाबको शुभकामना !
प्रकाशित मिति : २०७४ कार्तिक २९, बुधबार
मदन भण्डारीको जबजको जिम्मा मनाङेलाई, बीपीको सपना साकार पार्ने जिम्मा गणेश लामालाई !
मेरा आँखामा रवीन्द्र मिश्र: एक युगमा एकपटक मात्र जन्मन्छन् !